Maitiro Ekugadzirisa Yako Blog Yeinotevera Chinyorwa cheMaximum Impact. | Martech Zone
Chishanu, February 22, 2019 Svondo, Kurume 7, 2021 Douglas Karr
Chimwe chezvikonzero chandakanyora yangu yemakambani blogging bhuku makore gumi apfuura kwaive kubatsira vateereri kuwedzera mabloggi ekutsvaga enjini yekutsvaga. Kutsvaga kuchiri kwakasiyana nechero ipi svikiro nekuti mushandisi wekutsvaga ari kuratidza chinangwa sezvo ivo vari kutsvaga ruzivo kana kutsvaga kwavo kwavanotevera kutenga.
Kugadziridza bhurogu nezviri mukati meimwe posvo hazvisi nyore sekungokanda mamwe mazwi musanganiswa… pane matipi nematanho mashoma aunogona kushandisa kukwidzirisa iyo posvo uye kunyatso shandisa zvese blog post.
Kwose Kugadziridza kwePeji rega rega
Ndiri kuzofungidzira kuti yako zvemukati manejimendi system yakanyatsogadziriswa, uye kuti yako blog iri kutsanya uye nhare inopindura. Hezvino zvinhu gumi zvine basa kana yako saiti yatsikwa uye yakanongedzwa neinjini yekutsvaga… pamwe nezvinhu zvinozobata muverengi wako:
Peji Musoro - Parutivi, chinhu chakakosha pane peji rako ndicho chinyorwa chezita. Dzidza maitiro gadziridza ma tag ako emazita uye iwe uchawedzera chinhanho uye tinya-kuburikidza chiyero kune ako blog mablog mune yekutsvaga injini mhedzisiro mapeji (SERPs) zvakanyanya. Ichengete pasi pemavara makumi manomwe. Ive neshuwa yekuisawo yakasimba meta tsananguro yeiyo peji - pasi pegumi nematanhatu mavara.
Tumira Slug - iyo URL chikamu chinomiririra yako positi inonzi post slug uye inogona kugadziriswa mumapuratifomu mazhinji eblogging. Kuchinja marefu post slugs kuita mapfupi, keyword-centric slugs pane kuve neyakareba, inovhiringidza post slugs ichawedzera yako yekudzvanya-kuburikidza nehuremu mune yekutsvaga injini mhedzisiro mapeji (SERPs) uye ita kuti zvako zvemukati zvive nyore kugovana. Vashandisi veinjini yekutsvaga vari kuwana zvakanyanya verbose mukutsvaga kwavo, saka usatya kushandisa sei, chii, ndiani, kupi, riini, uye nei mumaslugs ako kusimudzira iyo slug.
Post Title - Kunyange zita rako repeji rinogona kukwidziridzwa pakutsvaga, rako rekutumira zita mune h1 kana h2 tag inogona kunge iri zita rinogombedzera rinokwezva uye rinokwezva mamwe mabhatani. Nekushandisa tag yemusoro, urikurega injini yekutsvaga izive kuti chikamu chakakomba chemukati. Mamwe mapuratifomu eblogging anoita iwo iwo musoro wepeji uye zita rekuposita zvakafanana. Kana vakadaro, iwe hauna sarudzo. Kana vakasadaro, iwe unogona kutora mukana wevaviri!
Kugovana - kugonesa kugona kwevashanyi kugovana zvemukati zvako kunozokutorera iwe vashanyi vazhinji pane kuzvisiya zvichiitika. Imwe neimwe yenzvimbo dzemagariro ine mabhatani avo ekugovana pasocial asingade nhanho kana ma logins… zvinoita kuti zvive nyore kugovana zvirimo uye vashanyi vanozozvigovana. Kana iwe uri paWordPress, iwe unogona zvakare kushandisa chishandiso senge Jetpack kushandura otomatiki zvinyorwa zvako kunze kwenhamba dzenzanga.
Mifananidzo - mufananidzo wakakosha chiuru chemazwi. Kupa mufananidzo kana vhidhiyo mune yako posvo kunopa manzwiro uye kunoita kuti zvemukati zvanyanye kusimba. Sezvo zvirimo zvako zvikagovaniswa, mifananidzo ichagovaniswa nayo munzvimbo dzese dzevanhu ... sarudza mifananidzo yako zvine hungwaru uye gara uchiisa mamwe mavara nerondedzero yakagadziridzwa. Kushandisa yakakura post thumbnail uye yakakodzera yemagariro uye feed plugins ichawedzera mukana wekuti vanhu vachabaya nepakati pavanogovaniswa.
gutsikana - Chengetedza zvemukati sezvipfupi sezvinobvira kuti uwane poindi yako. Shandisa mapoinzi ane mabara, misoro mikuru, mavara akashinga uye akatsveyamiswa kubatsira vanhu kuongorora zvirimo zviri nyore uye kubatsira injini dzekutsvaga kuti vanzwisise mazwi akakosha nemitsara iwe yaunoda kuwanikwa. Dzidza maitiro shandisa mazwi akakosha zvinobudirira.
Munyori Nhoroondo - Kuva nemunyori wako ruzivo kunopa kubata kwako kune zvako zvinyorwa. Vanhu vanoda kuverenga zvakatumirwa kubva kuvanhu… kusazivikanwa hakushumire vateereri zvakanaka pamablog. Zvakare, mazita emunyori anovaka masimba uye kugovana munharaunda ruzivo. Kana ndikaverenga chinyorwa chikuru, ini ndinowanzo tevera munhu wacho pa Twitter… uye ndobva ndaverenga zvimwe zvemukati zvavanoburitsa.
Comments - Makomendi anosimudzira zvirimo papeji nezvimwe zvinowirirana zvemukati. Ivo zvakare vanopa mukana kune vateereri vako kuti vabatanidzwe nekambani yako kana kambani. Isu takasiya mazhinji echitatu-bato plugins uye takasarudza kungoita WordPress default - iyo inosanganisirwa mune yavo Mobile maapplication, zvichiita kuti zvive nyore kupindura nekutendera.
Dana Kuita - Zvino zvaunenge uine muverengi pane yako blog, iwe unoda kuti vaitei? Ungada here kuti vanyore? Nyoresa kurodha pasi? Enda kune kuratidzwa kwesoftware yako? Kugadziridza yako blog post haina kukwana kunze kwekunge iwe uine nzira yekuti muverengi apinde zvakadzika nekambani yako.
Mapato uye Matagi - Dzimwe nguva vashandisi veinjini yekutsvaga vanodzvanya kuburikidza asi vasingawani izvo zvavari kutsvaga. Kuve nezvimwe zvinyorwa zvakanyorwa zvinoenderana zvinogona kupa zvakadzama kusangana nemushanyi uye kuzvidzivirira kuti zvisapopote. Iva nezvakawanda sarudzo zvekuti mushanyi agare nekuita zvimwe! Iwe unogona kubatsira izvi nekuona kuti une huwandu hwakangwara hwezvikamu, kuyedza kugovera yega yega positi kune yavo shoma. Zvemategi, iwe uchazoda kuita zvinopesana - kuyedza kuwedzera mataki eakakosha mazwi musanganiswa anogona kutyaira vanhu kuenda kunyore. Matagi haabatsire neSEO mune zvakanyanya sekutsvaga kwemukati uye zvakabatana zvakatumirwa.
Ndisati Ndaburitsa Imwe Blog Blog
Ruzhinji rwezvinhu zvakakosha izvi zvese zvakagadzirirwa uye zvoga nekumisikidza uye kumisikidzwa kwepuratifomu yako yekublogi. Kana ndangopedza nguva pane zvemukati, ini ndinopfuura nemamwe matanho nekukurumidza kugadzirisa zvinyorwa zvangu, asi:
musoro wenyaya - Ndinoedza kubatana nemuverengi uye kugadzira pfungwa yekuda kuziva saka ivo vanodzvanya kuburikidza. Ini ndinotaura zvakananga kwavari newe kana yako!
Featured Image - Ini ndinogara ndichiedza kutsvaga yakasarudzika uye inomanikidza mufananidzo wepositi. Mifananidzo inofanira kusimbisa meseji nemaziso.
Utungamiriri - Vashanyi vari kupenengura vasati vaverenga, saka ini ndinoedza kushandisa misoro midiki, zvinyorwa zvine mabara, zvinyorwa zvine nhamba, mablog ekuti, uye mifananidzo zvinobudirira kuitira kuti vakwanise kubaya ruzivo rwavanoda.
Tumira Slug - Ndinoedza kuchengeta pasi pemashoko mashanu uye zvine chekuita nemusoro wenyaya. Izvi zvinoita kuti kugovana kuve nyore uye chinongedzo chiwedzere kumanikidza.
Zvinoonekwa - Ini ndinowanzo tsvaga paYouTube yehunyanzvi mavhidhiyo ekugovana uye kushandisa akawanda mifananidzo sezvandinogona. Ini ndinotumidzazve iyo mifananidzo zvinobudirira ndichishandisa machira, ayo anobatsira pakutsvaga kwemifananidzo uye nekugadzirisa peji. Zivai mufananidzo wangu wakaratidzwa wepositi iyi blog-post-yekutarisa.png.
Links - Ini ndinogara ndichiedza kuisa zvinongedzo kune akakodzera machira mukati mezvangu zvemukati kuti muverengi agone kudonha pasi kuti uwane rumwe ruzivo.
chikamu - Ndinoedza kungosarudza 1 kana 2. Tine zvimwe zvakadzama zvinyorwa zvinofukidza zvakawanda asi ini ndinoedza kuchengetedza chakanangwa chakanangwa zvakanyanya.
Tags - Ini ndinotaura nezvevanhu, mabhureki uye mazita echigadzirwa andiri kunyora nezvazvo. Pamusoro pezvo, ini ndichaita tsvagiridzo pamusanganiswa wezwi rakakosha vanhu vangashandisa kutsvaga iyo posvo.
Meta Description - Tsananguro diki iyi pasi pechinyorwa uye chinongedzo kune yako post pane yekutsvaga injini mhinduro peji inogona kudzorwa ne meta tsanangudzo. Tora nguva uye nyora rondedzero inogombedzera inotyaira kuziva uye inotaurira mushandisi wekutsvaga nei vachifanira kubaya kuenda kuchinyorwa chako.
Grammar uye Spelling - Pane zvishoma zvinyorwa zvandinoburitsa zvandisingazunguze musoro nekunyara apo pandinoverenga mazuva apfuura kana kuwana mhinduro kubva kumuverengi pane yakapusa girama kana chiperengo kukanganisa kwandakaita. Ndinoedza kuongorora zvese zvinyorwa ne Grammarly kuti ndizviponese ... newewo, unofanira!
Mushure mekunge Ndaburitsa Imwe Blog Blog
ushambadzi - Ndinoita chokwadi ini kusimudzira zvinyorwa Ini ndinonyora munzira dzese uye nemukana wese, ndichiita kuti nditarise uye kumaka vanhu, ma hashtag, kana masosi andinotaura.
Zvishandiso senge Agorapulse inogona kuuya inobatsira chaizvo kuronga nyore kusimudzira kwechinyorwa chimwe nechimwe. Zvimwe zvinyorwa zvinozivikanwa kwazvo zvekuti ndinoronga tweet mwedzi wega wega, zviziviso zvezviitiko zvandinoronga kusvika pachiitiko, uye zvimwe zvinyorwa ndinodzokorora kamwechete muchinguva sezvazvinonzwisisika. Chishandiso chinoshamisa chinoita kuti hupenyu hwangu huve nyore. Heino huwandu hwayo inogonesa yangu yemagariro midhiya kubatanidzwa… mwedzi kusvika zvino
kuburitsa: Ndiri anozvirumbidza brand mumiriri weAgorapulse!
Heano zvinyorwa zvinoenderana nezve optimization izvo zvinogona zvakare kukubatsira iwe:
Tags: munyori wenhoroondoBlog romukovablog post optimizationCategorieschikamuchecklistContent Marketinginoratidzwa mufananidzosei kutimaitiro ekugadzirisa sei blog postmifananidzomukati rekubatanidzakushandiswa kweshokooptimizationgadziridza blog postpeji pejipost slugpost thumbnailzita rekutumirakugoveranaSocial Media Marketingsocial sharingtaggingmavhidhiyoYouTube
Gumiguru 24, 2012 pa 4:38 AM
Kutenda nekugovana! 😉
Iyo Dhizaini Basa
Zvita 23, 2012 na2: 07 PM
aya matipi anobatsira chaizvo.
Kukadzi 1, 2013 na12: 13 PM
NDATENDA iwe neruzivo rwakakosha pamatagi akasiyana siyana uye chinangwa chega chega chega chikamu chemaki. Wakajekesa yakawanda yeangu "makore" pfungwa pane tag nyaya.